« Amboary ny lalan’ny Tompo » - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Notokanana ny televiziona katolika voalohany eto Madagasikara il y a 8 heures
« Amboary ny lalan’ny Tompo »
Mitohy hatrany ny fiarahantsika eto amin’ny www.lakroa.mg sy ny ekipan’i Lakroan’i Madagasikara. Indro famoaboasana ny tenin’ny Soratra Masina tamin'ny alahady 29 novambra teo. Natao hanampy anao hivelona ny finoana amin'izao fisantarana ny taom-baovao litorijika izao. Entina mamakivaky herinandro vaovao ihany koa. Koa samia ho tahin’Andriamanitra e.
Alahady 6 desambra 2020
FIAVIANA II B
Iz. 40, 1-5. 9-11 ; 2Pi. 3, 8-14 ; Mk. 1, 1-8
Mitodika manokana any amin’i Joany Batista ny kristianina amin’izao alahady faharoa amin’ny Fiaviana izao. Manako ao an-tsofina ihany koa ny antsony hoe « amboary ny lalan’ny Tompo ». Kristy ho avy no banjinina. Izy ho tonga no iomanana sy anamboarana làlana saingy i Joany no jerena sy henoina. Eny, toy ny fanondro manondro Ilay tokony ho banjinina i Joany. Tsy ny fanondro no zava-dehibe fa izay tondroiny. Tsy ho hita anefa Ilay tondroina raha tsy eo ny fanondro. Toy ny feo manako ao an-tsofina izy. Tsy ny feo anefa no inona fa ny hevitra sy ny votoatin’ilay feo…
« Indro aho maniraka ny anjeliko eo alohanao, izay hamboatra ny lalanao ». Izany tenin’i Malakia mpaminany (Mal. 3,1) izany no entin’ny evanjely milazalaza voalohany momba an’i Joany Batista. Oharina amin’ny anjely izy, « angellos » hoy ny Grika, izany hoe « iraka ». Irak’Andriamanitra, iraka mpialoha lalana. Toy ny tehina mialoha andriana ka tsy voninahitra fa adidy. Adidy nankinina aminy ny hanomana ny olona hanamboatra ny lalana hodiavin’Ilay ho avy. Elia mpaminany no noheverin’ny maro fa ho ilay « anjely – iraka » tsy maintsy ho avy mialohan’ny hahatongavan’ny Mesia. Ireo mpanoratra ny evanjely kosa, rehefa nandray ny fampianaran’i Jesoa avy tamin’ireo apostoly, dia nahatakatra fa i Joany Batista no ilay iraka eo alohan’ny Mesia, ilay hanamboatra ny lalana halehany.
« Injay misy feo miantso any an’efitra hoe : Amboary ny lalan’ny Tompo, ahitsiho ny alehany ». Mbola tenin’ny mpaminany (Iz. 40, 3) ihany koa no entin’ny evanjely manohy ny filazalazana momba an’i Joany Batista. Oharina amin’ny feo any an’efitra izy. Feon’ilay iraka mpialoha lalana. Feo manako miantso ny olona hiomana amin’ny fandraisana ny Mesia. Tsy ny feo anefa no inona fa ny votoatin’ny hevitra ambaran’ilay feo : amboary ny lalan’ny Tompo, ahitsio ny alehany… Tsy ny lalana diavin’ny tongotra no hamboarina fa ny lalam-piainan’ny olombelona hizoran’Ilay ho avy. Ny aty fanahin’ny tsirairay no lalan’ny Tompo. Ny toe-piainan’ny tsirairay no lalan-kalehany… Fiantsoana fibebehana no nataon’i Joany. Notanterahiny tamin’ny fanaovany ny bateminy izany dia ny batemim-pibebahana ho famelana ny fahotana. Batemy teo amin’ny ranon’i Jordany; ilay renirano niampitan’ny vahoaka Israely fahiny mialoha ny nidirana tao amin’ny tany nampanantenaina.
« Volon-drameva no nitafian’i Joany, fehikibo hoditra no nanodidina ny andilany, ary valala sy tantely remby no fihinany ». Ny filazalazana ny fomba fitafiny na ny foto-tsakafon’i Joany ihany koa dia mbola manambara ny fihetsika fanaon’ny mpaminany fahiny. Fomban’ny mpaminany ny mitafy volon-drameva, araka ny filazan’i Zakaria mpaminany (Zak. 13, 4) sy mihetra fehikibo hoditra, tahaka ny nataon’i Elia mpaminany (2Mpanj. 1, 8). Mpaminany ihany koa i Joany Batista ary mihoatra noho ny mpaminany rehetra teo alohany aza. Tsy hoe haminany ny hoavy tsy mbola fantatra izy fa mpaminany mpialoha lalana Ilay ho avy ary hanamboatra ny fon’ny olona handray Azy. Hiantso fibebahana ka asehony amin’ny teniny sy amin’ny ataony ary amin’ny fiainany manontolo ny antsony hoe « amboary ny lalan’ny Tompo ».
« Ary izao no notorîny : ‘avy ao aoriako Ilay mahery noho izaho…’ ». Sady niantso fiovan-toetra i Joany no nanao batemim-pibebahana. Tsy nilaza tena izy na nitory ny tenany fa nanambara kosa ny momba ny Mesia Ilay ho avy. Tsy nirehareha izy na niseho ho mahery sy matanjaka. Mpialoha lalana ihany i Joany fa ho avy aoriany Ilay Tena Izy. Mahatsiaro tena ho kely sy bitika izy eo anatreahn’Ilay Mahery noho izy. Ny azy mantsy batemy amin’ny rano ihany fa ny an’Ilay ho avy kosa batemy amin’ny afon’ny Fanahy Masina.
« Tompo ô ! Iraho toa an’i Joany Batista izahay, hitondra ny hafatrao amin’izao tontolo izao, ka hanambara Anao ho fantatry ny olombelona ary hanoro lalana ireo mbola lavitra Anao ».
RTCM : Notokanana ny televiziona katolika voalohany eto Madagasikara - il y a 8 heures
Teny Mahavelona : « Mibebaha: Ny tarehy ratsy no tsy azo ovàna fa ny toetra ratsy azo ovàna » - il y a 3 jours
Teny Mahavelona : « Samy nantsoin’Andriamanitra tsirairay isika… » - il y a 8 jours